Walaalka cusub ee Emirates oo caafimaad qaba oo ku sugan Koonfur Afrika waxaa la yiraahdaa Cemair
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Walaalka cusub ee Emirates oo caafimaad qaba oo ku sugan Koonfur Afrika waxaa la yiraahdaa Cemair
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dib-u-dhiska • Wararka Koofur Afrika • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Wararka Imaaraadka Carabta • Wararka kala duwan
Cemair ee Koonfur Afrika hadda wuxuu Dubai ku leeyahay walaal weyn oo caafimaad qaba: Emirates Airlines
Cemair oo fadhigiisu yahay Koonfur Afrika (5Z) ayaa ka shaqeeya duulimaadyada rakaabka ee gudaha iyo kuwa caalamiga ah, iyo sidoo kale duulimaadka kirada ah. Xarunta diyaarada iyo xarunteeda waxay ku taalaa Johannesburg ee OR Tambo International Airport (JNB). Goobaha duulimaadyada waxaa ka mid ah Bloemfontein's Bram Fischer Airport (BFN), Cape Town International Airport (CPT), Margate Airport (MGH), Sishen Airport (SIS) iyo Plettenberg Bay Airport (PBZ). Diyaaradda diyaaraddu waxay ka kooban tahay 20 diyaaradood, oo ay ku jiraan Bombardier CRJ-100, Bombardier Dash 8 iyo Beechcraft 1900D. Diyaaradaha waxaa loo habeeyay dhammaan fadhiga Heerka Dhaqaalaha.
Shirkadda diyaaradaha ee Emirates ayaa ku tilmaamtay tallaabo lagu taageerayo kor u qaadista howlaha ka dib markii ay kor u qaadday adeegyadii rakaabka ee ay u waday Koonfur Afrika. Emirates waxay la saxiixatay Cemair heshiis khadka khadka ah kaas oo u furaya isku xirka lix meelood oo kale oo ku yaal Koonfur Afrika iyada oo loo marayo marinnada diyaaradaha ee Johannesburg iyo Cape Town.
Iskaashiga u dhexeeya Emirates iyo Cemair sidoo kale waxaa ku jira dhowr meelood oo firaaqo ah oo ay si gaar ah u siisay Cemair.
Tani waxay calaamad u tahay iskaashigii ugu horreeyay ee u dhexeeya labada shirkadood iyo iskaashiga Emirates ee afaraad ee South Africa.
Tan iyo Emiraha ayaa dib u bilaabay duulimaadyadii Dubai ilaa Johannesburg Bishii Sebtembar, qabanqaabada u dhexeysa Emirates iyo Cemair waxaa ka mid ah fududeynta tikidhada hal tigidh oo wata ballan iyo boorsooyin laga soo wareejiyo Johannesburg iyo Cape Town ilaa Bloemfontein, Kimberley, Margate, Durban, Hoedspruit, Plettenberg Bay, George, iyo Sishen.
Adnan Kazim, oo ah Sarkaalka Ganacsiga ee Emirates Airline ayaa yiri: “Waxaan ku faraxsanahay inaan la shuraakowno Cemair oo aan bilowno heshiiskayaga khadka tooska ah. Xiriirrada cusub ee Cemair waxay siiyaan macaamiisheenna xitaa fursado badan si ay si habsami leh ugu safraan meelo badan oo ka mid ah meelaha xilliga firaaqada ee ugu caansan Koonfur Afrika, marka lagu daro dheefta dheeraadka ah ee isku xirnaanta Cemair ee si gaar ah loogu adeegay Margate iyo Plettenberg Bay.
Xiriirinta shabakadahayagu waxay adkeyneysaa ballanqaadkayagii ahaa inaan macaamiisheena siinno xitaa fursado safar oo dheeri ah, gaar ahaan kuwa doonaya inay la kulmaan kuwa ugu cadcad Koonfur Afrika, iyo sidoo kale dadka socotada ah ee qorsheynaya safarada cusub. Waxaan rajeyneynaa inaan wada shaqeyno oo aan xoojinno xiriirkeena. ”
Miles van der Molen, Madaxa Fulinta ee CemAir ayaa yiri: “Waxaan ku faraxsanahay inaan la shuraakowno Emirates Airline, oo ah magac la mid ah tayada iyo xarragada. Heshiiskayaga khadka tooska ah wuxuu siinayaa macaamiisheenna raaxo iyo keydin maadaama ay hadda si aan kala go ’lahayn uga xirmi karaan duulimaadyadayada illaa shabakadda weyn ee caalamiga ah ee diyaaradan sumadda leh.”
Markaan sii wadno fidintayada inta lagu guda jiro muddadii ka soo kabashada Covid waxaan ogaannay in hadda in ka badan iskaashiyadu ay fure u yihiin guushayada. La shaqaynta hoggaamiyeyaasha suuqyada sida Emirates Airline waa muujin dheeraad ah oo ah sida ay nooga go’an tahay macaamiisheena si aan u siino adeegga iyo qiimaha ugu fiican. ”
Macaamiishu waxay safarkooda ku ballansan karaan emirates.com, xafiisyada iibka Emirates, iyo wakaaladaha socdaalka.
Emirates waxay kor u qaadday hawlaheedii/ka imaanaysay Koonfur Afrika horaantii bishaan waxayna hadda ka shaqaysaa 14 duulimaad toddobaadkiiba Koonfur Afrika iyada oo u sii marinaysa albaabadeeda Johannesburg, Cape Town, iyo Durban. Duulimaadku wuxuu sii wadaa inuu si nabadgelyo ah dib -u -dhis ugu sameeyo shabakadiisa caalamiga ah, isagoo isku xiraya macaamiisha iyo Dubai dhexdeeda in ka badan 120 meelood.
Shirkaddu waxay ballaarisay raadkeeda guud ahaan Koonfurta iyo Koonfurta Afrika iyada oo kobcinaysa iskaashiga khadka dhexe iyo codeshare ee South African Airways, Airlink, Cemair iyo Flysafair, iyada oo wadata xulashooyin badan oo isku xirnaan ah oo macaashkooda siiya faa'iidooyin badan, iyagoo taageeraya soo kabashada safarka iyo warshadaha dalxiiska.
CemAir Ltd. waa diyaarad gaar loo leeyahay oo ka shaqaysa Koonfur Afrika oo u adeegta goobaha dalxiiska ee caanka ah iyo magaalooyinka ganacsiga ee muhiimka ah, iyo sidoo kale inay kiraystaan ​​diyaaradaha shirkadaha kale ee Afrika iyo Bariga Dhexe. Shirkaddu waxay xarunteedu tahay Johannesburg
Cuthbert Ncube, Gudoomiyaha Dalxiiska Afrika Board wuxuu soo dhaweynayaa iskaashiga cusub ee u dhexeeya Imaaraat-ka fadhigiisu yahay Dubai iyo CemAir oo fadhigiisu yahay Koonfur Afrika
Gaarsiinta baabuurka ugu horreeya ee Cummins ku shaqeeya ee Penske ...